बाजुराबाट अायो सबैलार्इ रूवाउने यस्तो खबर किशोरीको दुःखद मृत्यु…. – PathivaraOnline
Home > समाचार > बाजुराबाट अायो सबैलार्इ रूवाउने यस्तो खबर किशोरीको दुःखद मृत्यु….
admin September 28, 2018 समाचार	0
बाजुरा, असोज १२ । जिल्लाको बडिमालिका नगरपालिका-४ मा भीरबाट खसेर एकजना बालिकाको मृत्य भएको छ। मृत्यु हुनेमा बडिमालिका नगरपालिका-४ रिला बस्ने काँशी चदाँराकी १५ वर्षीया छोरी पूजा चदाँरा रहेकी छन्। भैंसीका लागि घाँस काट्न गएको बेला गाउँ नजिकैको भाँटीकुणा भीरबाट खसेर उनको मृत्यु भएको हो। शुक्रबार बिहान करिब ११ बजेतिर घटनास्थलमै मृत्यु भएको उनकी दिदी लक्ष्मी विकले बताइन्।
नेपाल राष्ट्रिय मावि जडाङ्गमा कक्षा १० मा अध्ययनरत पूजा विद्यालय नगएर भैंसीका लागि घाँस काट्न गएकी थिइन्। घाँस काट्ने क्रममा खुट्टा चिप्लिएर भीरबाट खसेको हुनसक्ने परिवारको अनुमान छ। यहाँका अधिकांश बालबालिका पढाइभन्दा घरको काम अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
खुशीको खबर! गोल्डेन मेडल पाउदै नेपालका प्रीतम पुगे सारेगमप लिटिल च्याम्प्सको उत्कृष्ट १५ मा । उनले गाएको यो गित बन्यो भाइरल (भिडियो सहित)
आज निम्न समय र स्थानमा श्रद्धाञ्जली सभा राखिएकाले सम्पूर्णमा उपस्थितिको अनुरोध!
नगरपालिकाका मेयर र वडाध्यक्ष नै बिजुली चोर – तस्विर सहित